नेकपा स्थायी कमिटी कि 'स्थगन' कमिटी ?
शीर्ष नेताहरूबीचको शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक निरन्तर स्थगित भइरहेको छ । हरेक दिनजसो स्थगित हुने स्थायी कमिटी बैठक शुक्रवार त २ पटकसम्म स्थगित गरियो ।
बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक दिउँसो ३ बजेलाई सारियो । सहमतिका लागि भन्दै आइतवार पुनः स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले नेकपाको स्थायी कमिटीलाई 'स्थगन' कमिटी भन्दै व्यंग्य कस्न शुरू गरेका छन् । असार १० गतेदेखि शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठक आधादर्जन पटक स्थगित भइसकेको छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले ट्वीटरमा लेखेका छन्, 'नेकपा स्थायी कमिटी बैठक ११ बजेबाट ३ बजेलाई सरेछ । अब कति सर्ने हो ? लाजै मर्दो भो अब त !' ३ बजेसम्म स्थगित भनिएको बैठक पुनः आइतवारलाई सारिएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठक आइतवारलाई सारेर नेताहरू शनिवार सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच हुन नसकेको 'असहमति' सचिवालय बैठकको एजेण्डा बन्न गइरहेको छ ।
महासचिव विष्णु पौडेल सहमतिका लागि समय चाहिएकाले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताए । उनले लोकान्तरसँग भने, 'शीर्ष नेताहरूबीच सहमति खोज्नका लागि स्थायी कमिटी बैठक आइतवारलाई सारिएको हो । यो बीचमा नेताहरूबीच थप अनौपचारिक छलफल हुनेछ भने शनिवार सचिवालय बैठकमा नेताहरू खुलेर कुरा राख्नुहुन्छ ।'
पौडेलले आम कार्यकर्ताले पार्टी फुटेको देख्न नचाहेकाले उनीहरूकै भावनाअनुरुप अघि बढ्ने सहमति हुने बताए । 'आम जनता र नेता कार्यकर्ताको भावनाविपरित पार्टी जाँदैन,' पौडेलले भने, 'त्यसैका लागि हामी समय लिएर सहमति खोज्दैछौं ।' पौडेलले शनिवार बस्ने सचिवालय बैठकका लागि कुनै खास एजेण्डा नभएको बताए ।
विवाद समाधानका लागि भन्दै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड पटक-पटक एक्लाएक्लै वार्ता गरिरहेका छन् । जारी पाचौं स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्दै हरेकदिन जसो अध्यक्षद्वयबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटघाट हुने गरेको छ तर भेटघाटले पार्टी विभाजन जोखिम पनि घटाएको छैन भने एकढिक्का भएर अघि जाने खुसी पनि नेता कार्यकर्तालाई दिन सकेको छैन ।
न त प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीको राजीनामाको अडान छाडेको छ, न त प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गर्ने कुनै छाँटकाँट देखाएका छन् । 'सरकार राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा पूर्ण असफल भएको छ,' नेपालनिकट एक नेताले लोकान्तरलाई भने, 'आफू असफल भएको महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीजीले राजीखुसीले राजीनामा गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।'
पार्टीले गलहत्याएको सन्देश जाने गरेर ओली राजीनामा गर्ने मुडमा छैनन् । संकटका बेलामा प्रधानमन्त्रीले छोडे देश झन् अस्थिरतामा फँस्ने तर्क ओलीपक्षको छ । बरू सहमतिका लागि भन्दै 'टाइम बाइ' गर्न सके प्रचण्ड-नेपाल समूह ओलीको राजीनामाबाट पछि हट्न सक्ने आंकलन बालुवाटारको रहेको छ ।
'तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प छँदैछैन,' ओलीनिकट एक नेताले भने, 'पार्टीको विधानले उहाँलाई अध्यक्ष मानेको छ भने संसदीय दलले प्रधानमन्त्री मानेको छ । यतिबेला उहाँ(ओली)को विकल्प खोज्ने हो भने पार्टी विभाजन हुने र देश अस्थीरतामा फँस्नेछ ।'
त्यसो भए सहमति कसरी हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर अघि बढ्न सकिन्छ, पुराना सहमतिहरूको थप मूर्त व्याख्या गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । धेरै बाटाहरू छन् । सबै विकल्प सकियो भन्ने होइन ।'
अध्यक्षद्वयबीचको निरन्तरको भेटघाटपछि असार २६ गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक साउन २ सम्म सारिएको थियो । गतसाता प्रधानमन्त्री ओलीले अतिवृष्टिका कारण देशभर निम्तिएको प्राकृतिक विपत्तिका बारेमा सम्बोधन गरेका थिए । उनले पार्टीभित्र समस्या देखिएको तर त्यसलाई धैर्यता र संयमता अपनाएर समाधान गरिने बताएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट आफ्नो गृहजिल्ला चितवन पुगेका प्रचण्डले आफूले हतार गरेको भए देश दुर्घटनामा पर्ने भन्दै केही न केही सहमति भएको संकेत गरे । नेकपाका अधिकांश नेताहरू पनि अध्यक्षद्वयबीच केही न केही समझदारी भएको अनुमान गरेका थिए ।
बिहीवार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा ओली, प्रचण्ड र नेपालबीच सघन वार्ता भयो । प्रचण्ड र नेपालले ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पुरानो अडान दोहोर्याए भने ओलीले राजीनामा नदिने अडानबाट टसको मस भएनन् । केही समझदारी हुने अनुमान गरेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा त्यतिबेला खल्लोपना छायो, जतिबेला तीनै नेताहरूले पुरानो अडान नत्यागेको समाचारहरू सार्वजनिक भए ।
तीन नेताको भेटघाट निष्कर्षबिहीन भएपछि बिहीवार साँझ प्रचण्डनिवास खुमलटारमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेताहरू जम्मा भए भने बालुवाटारमा ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई बोलाएर सहमतिका लागि अहिलेसम्म भइरहेको प्रगतिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
गत असार १० गतेदेखि शुरू भएको नेकपा स्थायी कमिटीको पाचौं बैठकमा नेताहरूले धमाधम ओलीको राजीनामा माग्न थालेपछि ओली नराम्रोसँग चिढिएका थिए । उनले स्थायी कमिटी बैठक चल्दाचल्दै संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए । यसपछि विवादले झन् उत्कर्षको रूप लिएको थियो ।
सहमतिका लागि भन्दै असार १९, २१, २४, २६ र साउन २ गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरियो । यो बीचमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच असार १८, १९, २१, २२, २३, २४, ३१ र साउन १ गते भेटघाट र छलफल भयो । साउन १ गते (बिहीवार) नेता नेपालसहित त्रीपक्षीय भेटघाट भएको थियो ।
शुक्रवार ११ बजे बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक भन्दा अगाडि ओली र प्रचण्ड वार्तामै थिए । दुवै अध्यक्षको भेटघाट चलिरहँदा स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मोबाइलमा बैठक ४ बजेसम्म स्थगित भएको भन्दै एसएमएस पुग्यो ।
अध्यक्षद्वयबीच भेटघाट सकिएपछि स्थायी कमिटी बैठक आइतवारसम्मका लागि स्थगित गरेर शनिवार सचिवालय बैठक बोलाउन सहमति बनेको थियो ।